कोरोना संक्रमितको शरीरमा अक्सिजन बढाउने उपाय प्रोन पोजिसन कसरी गर्ने? – Mission
कोरोना संक्रमितको शरीरमा अक्सिजन बढाउने उपाय प्रोन पोजिसन कसरी गर्ने?
‘कोरोना संक्रमितलाई किन घोप्टो पारेर सुताइएको होला ?’ धेरैको मनमा उठेको प्रश्न हो यो ।
कोरोना संक्रमितलाई किन घोप्टो पारेर सुताइएको हुन्छ? यसरी सुताउनुको वैज्ञानिक कारण के छन्? हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका छाती रोग विशेष डाक्टर निरज बम र फिजियोथेरापिष्ट डा कृष्ण प्रसाद नेपाललाई सोधका छौं।
तर, गर्भवती महिला, भर्खरै सर्जरी भएका, फ्याक्चर भएकाहरुलाई भने प्रोन पोजिसन गराउन उपयुक्त हुँदैन। #स्वास्थ्य खबर
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ ११, २०७८ 11:00:34 AM |
Prevनिषेधाज्ञाले रोकियो बलेवा विमानस्थल र बसपार्कको कालोपत्रे
Nextआरोग्य सेवा केन्द्रमा सेवाग्राही बढे